Isbedelka XRP ugu fiican
Qiimaha ugu fiican ee la iibsado XRP $ 0.629692 XRP/JPY Mr. Exchange
Qiimaha iibka ugu fiican XRP $ 0.702345 XRP/ZAR Altcoin Trader
Heerka ugu wanaagsan XRP waa sicirka ugu fiican ee hadda la is weydaarsado lacagta digital. Heerka sarrifka lacagaha ee hadda taagan XRP waa celceliska sarrifka lacagaha ee dhammaan macaamil ganacsiyada. Qiimaha waxaa lagu go'aamiyaa dheelitirka saadka iyo baahida kaqeyb galayaasha suuqa. Tirada iibsadayaasha iyo iibiyaasha XRP ee ku jira isweydaarsiga kasta oo crypto kala iibsiga waa ka duwan yahay. Sidaa darteed, lacagta digital XRP sicirka sarrifku waa mid shaqsi ku saabsan sarrifka lacagaha 'lacagta digital'.
Kombiyuutarka ugu fiican XRP
Qiimaha iibsiga ugu fiican ee XRP maanta waa $ 0.629692 oo leh XRP/JPY ganacsiyo ah Mr. Exchange suuqa sarrifka.
Qiimaha iibka ugu badan ee XRP maanta waa $ 0.702345 oo leh XRP/ZAR ganacsiyo ku saabsan Altcoin Trader suuqa kala iibsiga.
Boorsada ugu wanaagsan XRP boorsada waa qiimeyn ku saleysan milkiileyaasha lacagta digital. Boorsada jeebka loo yaqaan 'crypto wallet' wuxuu leeyahay cabbirrada ugu waaweyn: isku halaynta, fududeynta, amniga. Isweydaarsiga ugu fiican XRP isweydaarsiga waxaa lagu go'aamiyaa waqti gaar ah waqtiga. Falanqaynta macaamil ganacsiyo dhammaystiran oo ku saabsan iibsashada iyo iibinta lacagta digital ayaa loo fuliyaa si joogto ah. Waxaan baarnaa gebi ahaanba XRP suuqa sarrifka lacagta digital, waxaanan u dooranaa heshiisyada ganacsi ee ugu wanaagsan iibsashada iyo iibinta.
Suuqa ugu fiican XRP
Waa macquul inay tahay in la qaato in haddii dhowaan la isweydaarsiga uu jiro qiimaha ugu wanaagsan ee iibsiga ee XRP, markaa ay habboon tahay in la raadiyo heerka ugu sarreeya ee sarrifka lacagaha 'lacagta digital'. XRP heerka ugu wanaagsan ee 19/01/2020 - ayaa lagu soo bandhigay jadwalkeena dhammaan sicirka heshiisyada isweydaarsiga maanta. Qiimaha ugu wanaagsan XRP sicirka iibsashada iyo iibinta ee maanta 19/01/2020 waxaan ku soo bandhigaynaa meel gooni ah bogga. Miiska kuwa ugu fiican Qiimaha XRP wuxuu ku siinayaa fursad aad ku aragto mid ka duwan XRP Qiimaha isweydaarsiga kala duwan. Waxaad si madaxbannaan u dooran kartaa isweydaarsiga lacagta digital oo leh isweydaarsiga ugu fiican ee lacagta digital.
Jadwalku wuxuu muujinayaa qiimaha sarrifka XRP maanta oo dhan suuqyada lacagta digital. Heerarka sarrifka ee dhammaan ganacsiyada ganacsiga waxaa loo beddelaa Dollar.
Heerka ugu wanaagsan XRP sicirka iibsigu ma lahan karo doollar, laakiin wuxuu ku socdaa lacag kale ama lacagta digital. Goobta lacagta ayaa muujineysa lacagta loogu talagalay in lagu iibsado XRP Xuquuqda sicirka iibka ugu wanaagsan waa isku xiraha isweydaarsiga halka macaamil iibku ka yahay kan ugu wanaagsan XRP ayaa dhacay. Qiimaha ugu wanaagsan ee lagu iibinayo XRP wuxuu noqon karaa markii lagu iibinayo lacag yar oo caan ah ama lacagta digital kale.
Waa muhiim in la ogaado nooca lacagta ah XRP baayacmushtaray markii sicirka ugu wanaagsan la helay. Waxaan u soo bandhignay macluumaadkan dhinaca midig ee heerka ugu sarreeya ee qiimaha 'lacagta digital'. Isweydaarsiga ugu fiican ee iibsashada ama iibinta XRP "waxaa lagu soo bandhigay miiska adeeggayaga. Waad arki kartaa XRP Macaamil ganacsi oo loo beddelo lacag kale ama lacagta digital haddii aad isticmaasho shaandhaynta lacagaha kale ee ku yaal miiska kor u dhaafka isweydaarsiga lacagta digital. Waxaan cusbooneysiinaa macluumaadka waqtiga-dhabta ah ee ku saabsan isweydaarsiga ugu wanaagsan ee iibsiga iyo iibinta XRP.